AMHERST မှတဆင့်သင်၏လမ်းကိုစားရန်အန္တိမလမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
UMass ရွေးချယ်ရာတွင်လူများအများစုသည်ထမင်းစားခန်းများစိတ်ထဲရှိကြသည်။ လူအများစုကကျောင်းဝင်းအစာအတွက်နိုင်ငံတွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်သည်။ငါ Hamp ဆူရှီသောမှော်ကြုံတွေ့ပါတယ်လာ, ဆိုလို။
သို့သော် UMass အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှလူသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောသတင်းများရှိသည်။ ထမင်းစားခန်းများသည်ဤနေရာတွင်စားရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာမဟုတ်ပါ။ Amherst သည်မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းမှာအစာအိမ်ကြီးရှိသည်။ သင်တစ် ဦး သင့်လျော်သော UMass Amherst စာသင်တွေ့ကြုံခံစားသွားလျှင်, သင်သည်ဤအံ့သြဖွယ်စားအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Santa Fe # အလှပဆုံး #brunch #treatyoself #eatlocal #amherst #omelette #wholegraintoast #bacon #homefries # breakfast #goodeats # နံနက် # သောကြာနေ့ #westernmass #instagood #instafood # ကုန်သွယ်ရေးသရုပ်ဆောင်များ #guac #strawberryjam #greenpeppersauce thelonewolf #maplesmokedbacon #thelonewolfamherst
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်၊ ည ၈း၆ နာရီ PDT တွင် Katey Bassett (@kateynovember) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
တစ်ညတည်းသောက်သုံးဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ Lone Wolf ပဲ။ သူတို့ကအံ့သြဖွယ်နံနက်စာစားစရာရှိသည်နှင့်ကအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေဖန်ဆင်းတော်ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်နှင့် gluten အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခု, သူတို့အစဉ်အမြဲငါစားဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်မှာကြော်အချို့ရှိသည်။ ဒါဟာအလေးအနက်ထားတဲ့ရက်နာကုသမှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုနှင့်လျောက်ပတ်သောစျေးနှုန်းပဲ!
အလှဆင်အလှဆင် @lettucedine #foodiefavorites #glazeddoughnuts ကသည်
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင်နံနက် ၁၁:၂၄ နာရီတွင် FOODIE FAVORITES (@foodie_favorites) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ။
အဘယ်သူသည်ဒိုးနက်ကိုမချစ်သနည်း?! သင်ချိုသောသွားကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင် Glazed သည်သွားရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့မှာချောကလက်ကွတ်ကွတ်မုန့်စိမ်းကနေချောကလက် oreo မြေပဲထောပတ်၊ ပုံမှန်ပုံစံဟောင်းဒိုးနတ်အထိသင်မြင်နိုင်တဲ့အရသာများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့မှာသက်သတ်လွတ် & gluten အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများရှိတယ်။
အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား သူတို့သည်မနက် ၂ နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးမည်သည့် donut မဆို၎င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းညနေခင်းများတွင် (တစ်ပတ်၏နေ့အပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲမှု) ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာသာရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 4ပြီ ၄ ရက်ည ၈း၃၀ တွင် Antonio's Pizza (@antoniospizza) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
ညဥ့်သန်းခေါင်ယံအန်တိုနီယိုခရီးစဉ်သည်အဓိက UMass အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောလိုင်းများ၊ ကျဉ်းကျဉ်းသောနေရာများနှင့်ဆူညံသံများစွာအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။ အန်တိုနီယို၏အမ်ဟာ့စ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာဖြစ်သော်လည်းခရီးစဉ်၏ပရမ်းပတာဖြစ်သင့်သည်။ ဤသည်မှာသင်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးပီဇာအချို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မနက် ၁း၀၀ နာရီအထိဖွင့်နိုင်သည်။
တဖန် Amherst စတိုင်လ်ဖြင့်သင်ရှေ့ဆက်ခေါ်ဆိုလျှင်သင်ထိုတွင်ရောက်သောအခါ၎င်းတို့အတွက်သက်သတ်လွတ်ပီဇာရှိနိုင်သည်။
Tay with နှင့်အတူအာဟာရအစားအစာ
11 လိရှဗက် (@ bean._) မှ ၂၀၁၆ မေလ ၁၉ ရက်၊ ည ၁၁း၄၉ တွင် PDT တင်သောဓာတ်ပုံ
အသစ်သောဆိပ်ခရိုင် CT အတွက်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ
သင်တစ် ဦး ပိုကောင်းတဲ့အကြိုအဘို့အစိတ်ဓါတ်များရှိပါကကြမ်းပြင် - မိတ်ဖက်နှင့်အတူထွက် Ning, ဂျူဒီရဲ့စုံလင်သည်။ ဒါပေမယ့်စောစောစီးစီးသွားပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းထိုင်ဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်ပါ။ သင်ရှိနေစဉ်သူတို့၏ကျော်ကြားသော popovers များကိုစမ်းသပ်ရန် (သို့) ကျွဲပန်းဂေါ်ဖီကိုမှာယူရန်သေချာပါစေ - မီနူးတွင်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင့်ဆာဗာကိုမေးပါကများသောအားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် သေရန်အတွက် ငါမင်းကိုပြောတယ် ၎င်းတို့တွင်ဒေသခံဘီယာအမြောက်အများကိုလည်းအသာပုတ်။ ရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
Post-leg နေ့ကနေ့လည်စာစာသားသည်မိုheaven်းကောင်းကင်သည် ?? ကင်အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ကိုက်လန်, ကုလားပဲနှင့်ဆန်။
Carolyn Viggh (@ carolyn.viggh.fit) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်၊ နံနက် ၉:၃၄ အချိန်တွင်တင်ခဲ့သည်။
Earthfoods ကဖေးသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ UMass Dining ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်ရှိပြီးသင်ထမင်းစားသည့်ဒေါ်လာကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသား ဦး ဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားရန်အသစ်တစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား။ ဒါဟာအားလုံးသက်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်ပါပဲ! ဒါ့အပြင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းကအရမ်းကောင်းတယ်၊ တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂီတကိုကြိုက်ကြတယ်။ ပင်မ from ည့်ခန်း၏ထောင့်တစ်ဝိုက်တွင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ပထမထပ်တွင်မြေကြီးများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျိန်းသေအတန်းများအကြားအားဖြင့်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုတ။
? F R ငါ D တစ် ဦး က Y အစားအစာများ?
@Poodieswithbootys မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ည ၁၂း၅၂ တွင် PDT တွင်တင်ခဲ့သည်
အဆိုပါ Black သိုးအခြားဒေသခံအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသတွင်းသားညှပ်ပေါင်မုပူးတွဲသည်၎င်း၏ဂီတမြင်ကွင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်း mic nights, jazz nights, နှင့်များစွာသောအရာများရှိသည်။ အဲလစ်ဇဘက် Warren သည်စကားပြောရန်ပင်သွားခဲ့သည်။ သငျသညျလူအစုအဝေးကိုရှောင်ရှားလိုလျှင်, သို့သော်, ကျိန်းသေဒေသခံပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုပ်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအစားအစာအချို့ကိုနေ့လည်ခင်း၌ pop ။
ရဲ့ရိုးသားကြပါစို့, ကောလိပ်အားလုံးသန်းခေါင်နှင့် 3am ၏နာရီအကြား junk အစားအစာအော်ဒါအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏အိပ်ဆောင်အခန်းပတ်ပတ်လည်ထိုင်လျက်နှင့်ထိုစိတ်ပျက်ဖွယ်တပ်မက်ခြင်းကျော်လွှဲပြောင်းယူသည့်အခါသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားများထဲမှအချို့သည် Domino's၊ Amherst ကျော် Wings၊ Southwest Express၊ Bruno's သို့မဟုတ် Baby Berk (မပို့ဆောင်နိုင်သောအရာများထဲမှတစ်ခု) ဖြစ်သည်။
ဒီတနင်္ဂနွေ #eastcoastfeastcoast က Wingin?: @ lettucedine
'ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်' မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ။ (@eastcoastfeastcoast) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ Aprပြီ ၁၉ ရက်၊ ညနေ ၅း၀၀ နာရီ PDT တွင်
စိတ်မပူပါနဲ့၊ စာရင်းကအဆုံးသတ်မထားဘူး။ ပြီးတော့ Northampton မှာကားမောင်းဖို့ခဏလေးပဲပျော်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ UMass ၌သင်၏အချိန်ကိုအမှန်ပင်ပျော်မွေ့လိုပါကသင်မကြောက်ဘဲ Freshman 15 ကိုလက်ခံသင့်သည်ဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Rec Center တွင်အပိုအချိန်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။